Fantatrao ve: Inona ny fepetra raha koarina ny faty efa voalevina?
lundi, 09 janvier 2017 15:22
Manoloana ny zava-misy any Antsohihy sy ho fahalalana ankapobehany dia misaotra ny namana mpahay lalàna mitondra fanazavana.
Tandremo fa tsy misy hifandraisany amin'ny fanadihadihana any an-toerana ity fanazavana tsotra ity.
Tsy autopsie tsotra fotsiny no atao fa exhumation suivie d'autopsie satria EFA NALEVINA ilay razana. Noho izany, dia tsy maintsy mamoaka DIDY AHAFAHANA MANAPONGATRA RAZANA MBA HOZAHANA (Ordonnance d'exhumation aux fins d'autopsie) ilay Juge d'Instruction.
Amin'izay fotoana izay, rehefa hotanterahina io Didy io ka ho sokafana ny fasana hakana ilay razana dia TSY MAINTSY MANATRIKA eo ny Zandary/Pôlisy, ny TOMPOM-PASANA sy ny Mpitory (Plaignant) ary ilay Voampanga na ny Avocat-any.
ILAINA IZAY amin'ny IDENTIFICATION VISUELLE AN'ILAY RAZANA.Sao sanatria mantsy dia FATY HAFA NO NOFONGARINA.
Fa nahoana no marobe ny dokotera?
Tsara marihana aloha fa rehefa any amin'ny Juge d'Instruction ny raharaha dia ilay Juge d'Intstruction ihany no MANANA FAHEFANA HANENDRY IZAY HANAO NY AUTOPSIE.
Misy Didy avoakany amin'izay: Ordonnance de désignation d'expert. Afaka mandroso ny anaran'ny médecin izay heveriny ho afaka hanatontosa izany ny Voampanga sy ny Mpitory.Tsy voafetra ny toerana iavian'ilay médecin.
Saingy ankehitriny moa dia TSY AMPY NY VOLAM-PANJAKàNA, ka raha ohatra lavitra be no misy ilay médecin (ohatra: Tana) dia izay naka azy no miantoka ny frais.
AFAKA TONGA DIA MANENDRY AVY HATRANY IZAY HEVERINY KOA ILAY JUGE D'INSTRUCTION.
Amin'ity raharaha Antsohihy ity izany dia inoana fa mety ho samy nanendry avy izany na ilay Voampanga na ilay Mpitory na ilay Juge d'Instruction, raha toa ka 7 marina ny medecins hanao ny expertise.
Saingy alohan'ny hanaovany ny asany, ireo expert rehetra ireo dia TSY MAINTSY MANAO SERMENT EO ANATREHAN'ILAY JUGE D'INSTRUCTION SY NY GREFFIER miaraka aminy fa hanatontosa an-tsakany sy andavany ny andraikitra napetraka taminy.
Amin'ny fitsaràna rehetra dia misy liste an'ireo expert nahavita serment teo amin'ny Cour d'Appel mahakasika sehatra maro. TABLEAU DES EXPERTS AGREES PRES LES COURS ET TRIBUNAUX no anaran'io.
Ao no tokony hanendren'ilay Juge d'Instruction ny hanao ny expertise. An-drenivohitry ny faritany anefa matetika no misy ireo expert ireo.Koa raha lavitra ilay fitsarana dia afaka manendry ny dokotera izay HEVERINY fa capable ilay juge d'instruction.
Ireo expert efa ao anaty tableau ve mbola miverina manao serment alohan'ny expertise ?
Isaky ny hanao expertise dia TSY MAINTSY MANAO SERMENT na dia efa nahavita tany amin'ny Cour d'Appel aza ilay dokotera.
Rehefa tafavoaka ka identifié ilay razana dia ireo expert désigné ireo (eto amin'ity raharaha Antsohihy ity dia ireo Médecin) ihany sisa no eo ka manao ny expertise. Vita iny dia averina alevina ilay razana ary manao ny rapport ireo expert ireo ka soniavin'izireo ary alefa any amin'ilay Juge d'Instruction.
Mety tsy mitovy ny avis an'ireo expert ireo fa samy manana ny azy. Samy manao ny TATITRA ("rapport") avy amin'izay fotoana izay.
Amin'io tranga tsy fitoviam-pijery io, dia IZAY AVIS IRAISAN'NY EXPERT MARO AN'ISA NO RAISIN'NY FITSARANA (Ohatra: 5, nahita fa meurtre io, 2 kosa nahita fa suicide io, dia ilay hevitry ny expert 5 no raisina).
Na izany aza anefa dia Ampahafantarin'ilay Juge d'Instruction ny Mpitory (Partie civile) sy ny Voampanga (inculpé) na ny avocat-any ny rapport d'expertise rehetra.
Azo enjehina ve ny dokotera mamoaka résultat hafa noho ny an'ny sasany, na ho lazaina fa nandray vola kolikoly?
Raha ny tokony ho izy aloha dia TSY VOAENJIKA KA VOASAMBOTRA ny expert (izany hoe, ilay médecin inspecteur na BMH raha nisy nizaha ny razana teo taloha).
AVIS mantsy no alefany. Raha EFA HITA FA FLAGRANT BE KOSA ANEFA NY ZAVATRA NATAONY, dia METY AFAKA ENJEHINA HO MPIRAY TSIKOMBAKOMBA (complice) ihany izy.Saingy TENA CAS RARE izany.
Azo eritreretina ve hoe tsy nisy taratasy nanokafana ilay fasana?
Tsy possible izany hoe TSY MISY ORDONNANCE D'EXHUMATION izany.
TSY AFAKA MANAO EXHUMATION SY EXPERTISE IREO MANTSY RAHA TSY misy an'izay didy izay. Faute professionnelle grave izany na ho an'ilay Juge d'Instruction na ho an'ireo médecin na koa ho an'ireo Pôlisy sy Zandary teo.
Samy azo enjehina pour VOL DE RESTES MORTELS izy ireo izay nanatontosa izany.
Ho an'ilay Juge d'Instruction manokana dia SUSPISCION DE CORRUPTION AVérée izany ka mitarika ny suspension-any avy hatrany.
Raha tany amin'ny hôpital ilay olona no maty dia TSY MAINTSY MISY NY BILLET D'HOSPITALISATION sy ny BILLET DE SORTIE.
Raha tsy misy izay billet d'hôpital izay na NOFORONINA dia mivandravandra fa COMPLICE ilay dokotera nanao izany.
Ary raha vao misy an'io billet d'hospitalisation io dia TSY MANANA FAHEFANA intsony ny dokoteran'ny BMH.
Izany hoe, tsy afaka mizaha ny razana intsony izy. Faute professionnelle mety hitarika ny fanesorana azy tsy ho dokotera intsony izany. Satria ny BMH no mijery ny razana hita eny amin'ny arabe, na any anaty tatatra, na maty any an-trano, fa tsy anjarany ny any amin'ny hôpital.
Ny médecin inspecteur mantsy no azo atao hoe LEHIBEN'NY DOKOTERA any amin'ny faritra iray. Marina fa tsy mifehy ny médecin libre izy, saingy AFAKA MANAO OBSERVATION MAFONJA kosa any amin'ny ordre des médecins raha toa ka misy ny dokotera manao ny tsy fanao. Io observation ataony io no matetika mitarika sazy hatramin'ny radiation ho an'ny médecin libre. Ka izay no atahoran'ireo azy.
Ny dokoteram-panjakàna moa dia efa eo ambany fiadidiany mazava ho azy.
- Misaotra anao ny ekipan'ny Sobika nitondra izay fanazavana izay.
- Mirary soa ho anareo mandray ihany koa.